Nsogbu nke Netwọk mmekọrịta: Nakwa na Sistemụ Ọrụ? | Site na Linux
Nsogbu nke Netwọk mmekọrịta: Nakwa na Sistemụ Ọrụ?
Na nso nso Netflix, ụwa niile ama ndenye aha gụgharia ọrụ, nke na-enye ndị òtù ya ohere ikiri ma ọ bụ ibudata usoro ihe nkiri na ihe nkiri na-enweghị mgbasa ozi na ngwaọrụ nwere njikọ ịntanetị, ewepụtala akwụkwọ akụkọ na-atọ ụtọ ma na-ese okwu. "The Social Nsogbu" ma ọ bụ na spanish "Nsogbu nke Social Networks".
N'ime ya, a na-ekpughere ihe ndị na-esonụ: Nke ugbu a ihe riri ahu na ha mepụtara ndị mmadụ nweta cafanyekwa oge gị, gị ntị, data gị, na n'ihi, nyocha, erigbu na uru otu ihe a, ya bụ, gbanwee onye ọrụ ọ bụla ka ọ bụrụ ngwaahịa bara uru n'ihi na gị ahịa, si otú aghụghọ emebi anyị nzuzo na nchekwa kọmputa, na ụfọdụ ụfọdụ ọbụna ụzọ anyị si eche echiche ma ọ bụ ịghọta eziokwu ma ọ bụ ụfọdụ eziokwu doro anya.
Nzuzo kọmputa: Ihe dị mkpa nke Nchebe Ozi
N'oge ndị ọzọ, anyị emetụla n'isiokwu metụtara Security Information, Cybersecurity, Nzuzo na Computer SecurityAgbanyeghị, ọ dị mma ịkọba na na njedebe nke akwụkwọ a ị na-enyocha ha n'usoro iji wusie ike ma ọ bụ melite ihe ọmụma gị na mpaghara a. Ndị a bụ:
N'ezie, ọ bụrụ na ị hụla ma ọ bụ gụọ banyere kwuru Akwụkwọ akụkọ Netflix, mgbe ị na-agụ ma ọ bụ na-agụghachi akwụkwọ ndị a gara aga nke ọma, ị na-ejide ya n'ozuzu ya, na otu «Nsogbu nke Social Networks» bụ extrapolated dị iche iche degrees, ka fọrọ niile Sistemụ arụmọrụ na ihe ọ bụla ọzọ nke oge a na nke ugbu a nwe, mmechi ngwa, ọrụ na ikpo okwu, ya mere, azụmahịa.
1 Social Media Dilemma: Akwụkwọ
1.1 Kedu ihe ọ bụ?
1.2 Kedu ihe ọ bụ?
1.3 Kedu ka o si emetụta sistemụ arụmọrụ?
1.4 Ngwọta ma ọ bụ Ntụziaka
1.5 Nhọrọ: Netwọk mmekọrịta na-emeghe ma na-emeghe
Social Media Dilemma: Akwụkwọ
"The Dilemma: Enwetụbeghị ụdị ndị na-emepụta teknụzụ nwere njikwa dị ukwuu banyere ọtụtụ ijeri anyị na-eche, na-eme, ma na-ebi ndụ anyị. ". Nsogbu mmekọrịta.
Dị ka Netflix, kwuru akwụkwọ bụ kọwara dị ka:
"A ngwakọ n'etiti akwụkwọ na ihe nkiri nke na-abanye n'ime azụmaahịa nke netwọkụ mmekọrịta, ike ha na-eri na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ ha na-akpata n'ime anyị: nri azụ ha zuru oke". Lee njikọ.
Banyere kwuru akwụkwọ, ọ bara uru ịkọba na ọ bụ nrụpụta nke Site na Jeff Orlowski, nke duziri Director nke Na-achụ Ice, nke ahụ enwetara dị ka ihe nkiri na-emeri emeri, a Emmy Award maka Akụkọ na Akwụkwọ.
N'ozuzu ya, enwere ike ịsị na mmepụta ahụ na-elekwasị anya na ikpughe n'ụzọ doro anya na mmetụta na nsonaazụ ya nke ọtụtụ phenomena (omume na omume) na-eme gburugburu Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet banyere ọha mmadụ, ma n'otu n'otu ma n'ozuzu (ọgbọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya). Ihe a niile, yana ebumnuche kachasị nke ịtụgharị anyị, onye ọrụ, na ngwaahịa a na-ere ere maka ndị ahịa mgbasa ozi.
N'ezie, ime ka o doo anya, na n'ọtụtụ ọnọdụ, nke a nwere ike iru edozi echiche anyị, usoro omume ma ọ bụ ụzọ isi hụ (ịghọta / ịkọwa) eziokwu, ma nke onwe ma nke mkpokọta, n'ụzọ dị nro na amaghị ụzọ nke na ọ bụghị naanị na ọtụtụ agaghị enwe ike ịghọta, kamakwa ịnakwere.
N'ikpeazụ, ọ na-ekwu na Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet mgbe:
Nye ụgha echiche nke na-elekọta mmadụ na-ekere òkè.
Mee ka nchekasị na ịda mbà n'obi nke ndị ọrụ ya.
Ikwado na / ma ọ bụ mee ka mgbasa mgbasa ozi ụgha (akụkọ adịgboroja) sie ike.
Mmetụta na mpaghara ma ọ bụ ụwa na ihe omume ndị dị mkpa dịka ntuli aka ma ọ bụ okwu ndị dị mkpa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba, ọdịbendị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, n'etiti ndị ọzọ.
Kedu ka o si emetụta sistemụ arụmọrụ?
Nke ugbu a na nke oge a Sistemụ arụmọrụ, ma kọmputa desktọọpụ ma ekwentị mkpanaaka, agbanahụ otu ihe a "Nsogbu". Ezigbo ihe nlereanya ga-abụ nke dị ugbu a Sistemụ arụmọrụ Windows 10, nke, maka nsụgharị ya ndị gara aga, lekwasịrị anya na ntinye ya na igwe ojii na imeziwanye ikike mmekọrịta ya, ya bụ, enye ngwa, ọrụ ma ọ bụ ozi lekwasịrị anya ma ọ bụ dozie onye ọrụ akọwapụtara na ya.
Maka nke a, Windows 10 na sistemụ arụmọrụ na ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ ngwaahịa nke ngwaahịa emechiri emechi na nke azụmaahịa na-agakarị n'iji «Telemetría, Spyware, Adware, Cookies», n'etiti ihe ndị ọzọ, na na na-enweghị ịdabere na ngosi, kpachaara anya ma ọ bụ, nke azụ ụzọ ma obu nke nsogbu a na-ahụkarị ha n'ime ha, ka oge na-aga. Nke ahụ anaghị abụkarị, maka ụfọdụ ndị ọrụ, achọpụta na / ma ọ bụ dozie ya n'ụzọ doro anya, dị irè ma dị irè.
Agbanyeghị, ozugbo anyị na-ewebata, ke ofụri ofụri, anyị email ma ọ bụ ihe onwe onye ọzọ maka banye ma mekọrịta ozi nkeonwe anyị, anyị nwere ike ịbụ na a ngwaahịa ndị ahịa site na ndị okike ha, ka nweta uru nke data anyị, ozi na ndị mmadụ.
Na ihe niile n'okpuru nnukwu "Noble premise", gịnị jikọọ ụwa niile na mmekọrịta na-enye ha ohere ịnye anyị ozi bara uru ma zie ezi maka ihe masịrị anyị na mkpa anyị.
Ngwọta ma ọ bụ Ntụziaka
Dị ka e kwuru na ụfọdụ n'ime Njikọ na akwadoro posts N'ime akwụkwọ a, ezigbo ga - abụ mgbe niile:
Kwusaanụ dị ka obere ozi dị ka o kwere mee enwe mmetụta na Social Networks na nzuzo na nke azụmahịa, ọkachasị ọrụ na ezinụlọ, ma na-ahọrọ iji Social Networks ndị nwere onwe ha ma na-emeghe. Ruo ókè o kwere mee, kpochapụ ma ọ bụ belata ojiji nke ọkwa.
Na-akwalite iji Free Software na Open Source, yabụ GNU / Linux, iji mezuo ya, ma si otú a gbasaawanye, dị ka ụdị ọzọ dị mma, nke dị nchebe ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ma ndị mmadụ n'otu n'otu ma ndị otu, yana nzukọ na ụlọ ọrụ nke ọha na eze na nke onwe, nke mba niile nke ụwa.
Jikọọ na Free Software Movement ma ọ bụ obodo dị ka o kwere mee, nke bụ mgbe nile a eke counterweight ka na-eto eto na oke ike nke Software Industry Corporations, na mgbe ụfọdụ ọbụna Hardware, ọ bụ ezie na n'ozuzu, ọ bụ a counterweight ka ihe niile nwe na-emechi na a nkà na ụzụ larịị, n'ihi ya elementals ụkpụrụ ihe ọmụma nke 4 iwu ma ọ bụ ụkpụrụ ya dị na ya.
Zere ihe niile o kwere mee (belata) ojiji nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla, Ngwa na azụmaahịa na PlatformỌ bụ ezie na ha na-adịkarị mma, ha na-abụkarịkwa mmasị nke mwakpo ndị mmadụ, mkpokọta, azụmahịa ma ọ bụ nke steeti. Na mgbakwunye, ha anaghị achọpụtakarị mmejọ ma ọ bụ mezie njehie na ọsọ ọsọ kachasị maka ndị ọrụ ha.
Nhọrọ: Netwọk mmekọrịta na-emeghe ma na-emeghe
Facebook na Twitter: Diaspora, Friendica, GNU Social, Hubzilla, Steemit, Mastodon, Movim, Nitter Pleroma, Okuna, Twister na ZeroMe.
Instagram na Snapchat: Pixelfed.
Pinterest: Myyna na Pinry.
YouTube: DTube, IPFSTube, LBRY, NodeTube, OpenTube na PeerTube.
Maka ozi ọzọ na ụzọ ọzọ nke mmemme, ngwa, sistemụ na nyiwe Free Software, Mepee Isi Iyi na Efu, ị nwere ike pịa ihe ndị a ndepụta nke nta nke nta na-eto. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ezigbo nkwado vidiyo na akwụkwọ a, anyị na-akwado oku na-esonụ: Shoshana Zuboff na nyocha onyunyo.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na etiti echiche kpughere site na Akwụkwọ akụkọ Netflix akpọ «El Dilema de las Redes Sociales», na mmụpụta ya ma ọ bụ iji ya tụnyere sistemụ arụmọrụ ugbu a na nke oge a, ngwa yana usoro ndị ọzọ, emechiri emechi na azụmaahịa, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Nsogbu nke Netwọk mmekọrịta: Nakwa na Sistemụ Ọrụ?
Ezigbo ihe atụ, sistemụ arụmọrụ na-ekpebi ụzọ anyị si arụ ọrụ na kọmputa anyị na ụkpụrụ dị n'okpuru ha na-emetụta anyị. Ọ bụ ya mere m ji kwenye na ngwanrọ n'efu na ihe ọmụma n'efu na ọ bụ ya mere m ji eji GNU / Linux.
Ekele, Juan Cisneros. Daalụ maka okwu gị na onyinye gị. Free Software, Open Source na GNU / Linux bụ ma ga-abụrịrị ugwu anyị ịgbaso na ọkwa teknụzụ.
I meela nke ukwuu maka ndetu ahụ. Ọ dị ezigbo mma.
Daalụ, Hernán. Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị dị mma.
Versiondị mbụ nke Microsoft Edge maka Linux ga-abata na Ọktọba
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Firefox 81